IHE ỌCHỤCHỌ DỊ MMA KARỊA YANDEX MA Ọ BỤ GOOGLE: URU NA ADỊGHỊ MMA NKE USORO - NETWORK NA INTANETI - 2019
Ihe ọchụchọ dị mma - Yandex ma ọ bụ Google
Ụwa nke oge a na-achịkwa ozi. Ebe ọ bụ na Intanet bụ netwọk zuru ụwa ọnụ, ọ dị mkpa iji ngwa ngwa chọpụta data dị mkpa na ya. A na-arụ ọrụ a site na ọrụ nyocha pụrụ iche. Ụfọdụ n'ime ha nwere asụsụ dị warara ma ọ bụ ọkachamara ọkachamara, ndị ọzọ na-elekwasị anya na nchedo onye ọrụ na nzuzo nke arịrịọ. Ma engines ọchụchọ zuru ụwa ọnụ bụ ndị kachasị ewu ewu, n'etiti nke ndị ndú abụọ a na-enweghị atụ, Yandex na Google, adịlarị anya dị iche. Kedu ihe nchọta dị mma?
Ntụle ọchụchọ na Yandex na Google
Yandex na Google gosipụtara nsonaazụ ọchụchọ dị iche iche: nke mbụ na-egosi ibe na saịtị, nke abụọ - ọnụ ọgụgụ niile nke njikọ
Maka ajụjụ ọ bụla ọ bụghị ogologo okwu, okwu ọchụchọ dị iche iche ga-edozi ọtụtụ narị puku njikọ, nke, na nlele mbụ, na-eme ka ọ bụrụ ihe efu iji jiri ha tụnyere ha. Ka o sina dị, naanị akụkụ dị nta nke njikọ ndị a ga-abara onye ọrụ uru, karịsịa na-eche na ọ na-adịkarịghị na-agabiga ihe karịrị mbipụta abụọ nke mbipụta. Kedu saịtị ga-enye anyị ozi dị mkpa karị na ụdị nke iji ya mee ihe bara uru ma dị irè? Anyị na-enye anyị ilele tebụl na atụmatụ nke njirisi ha na ọnụọgụ iri.
Na 2018, 52.1% nke ndị ọrụ na RuNet choro Google na naanị 44.6% na-ahọrọ Yandex.
Isiokwu: tụnyere njikwa search engines
Nyocha nyocha Yandex Google
Njirimara enyi na enyi 8,0 9,2
Jiri PC rụọ ọrụ 9,6 9,8
Enwe obi ụtọ nke ọrụ na ngwaọrụ mkpanaka 8,2 10,0
Akwukwo nke a na Latin 8,5 9,4
Mmetụta nke mbipụta ahụ na Cyrillic 9,9 8,5
Ịhazi ntụgharị asụsụ, edemede na okwu abụọ n'asụsụ abụọ 7,8 8,6
Ngosipụta ozi 8,8 (ndepụta nke ibe) 8,8 (ndepụta nke njikọ)
Nnwere onwe nke ozi 5.6 (na-enwe mmetụta nke igbochi, chọrọ akwụkwọ ikike maka ụfọdụ ụdị ọdịnaya) 6.9 (omume a na-emekarị nke ihichapụ data n'okpuru pretext of copyright infringement)
Kpido mbipụta site na mpaghara arịrịọ 9.3 (ihe si na ya pụta ọbụna n'obodo nta) 7.7 (ihe zuru ụwa ọnụ, na-enweghị nkọwa)
Na-arụ ọrụ na ihe oyiyi 6.3 (ihe na-abaghị uru, obere nzacha ndị arụpụtara) 6.8 (ịrụ ọrụ zuru oke na ọtụtụ ntọala, mana ụfọdụ foto enweghị ike iji mee ihe maka ikike nwebisiinka)
Ịza ọrụ oge na ngwaike 9.9 (oge kachasị na ibu) 9.3 (ọrụ nkwụsị na nhụjuanya na-enweghị atụ)
Atụmatụ ndị ọzọ 9.4 (karịa ọrụ iri atọ) 9.0 (obere ọnụ ọgụgụ ọrụ, nke a na-akwụ ụgwọ site n'iji ha mee ihe, dịka ọmụmaatụ, onye nsụgharị nwere ike ime ihe)
Ọnụ ọgụgụ zuru ezu 8,4 8,7
Na obere oke na Google. N'ezie, ọ na-enye nsonaazụ dị mkpa na ajụjụ ndị dị mkpa, dị mfe maka onye ọrụ ọhaneze, jikọtara n'ime ọtụtụ smartphones na mbadamba. Otú ọ dị, maka ọkachamara siri ike na-achọ maka ozi na Russian, Yandex kacha mma.
Ụlọ ọrụ ọchụchọ abụọ nwere ike na adịghị ike. Ịkwesịrị ikpebi otu n'ime ọrụ ha kachasị gị mkpa, ma mee nhọrọ, na-elekwasị anya na nsonaazụ nke otu niche.
Otu esi eji Mail.Ru ígwé ojii
Ngwa Equalizer maka gam akporo
Kedu ihe ntụgharị arụmọrụ na Windows 7
Esi tinyegharịa egwuregwu na Steam
Anyị na-amụta ID na Odnoklassniki
Windows na - eme ihe n 'msgcp110.dll mgbe faịlụ ga - apụ na usoro. Nke a nwere ike ime n'ihi ọtụtụ ihe; OS anaghị ahụ ọbá akwụkwọ ma ọ bụ na ọ na-efu efu. Mgbe ị na-etinye ihe omume ma ọ bụ egwuregwu na-enweghị ikikere, a na-ebudata faịlụ na kọmputa nke dochie ma ọ bụ melite msvcp110.dll. Nchọpụta nsogbu Iji wepu nsogbu na msvcp110. GụKwuo
Otu esi achọpụta ID gị na ụmụ klas gị na ihe kpatara ya